မြန်မာစစ်တပ်သည် ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဆန့်ကျင်ရာ၌ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းကို လက်နက်အဖြစ်သုံးကြောင်း - အစီရင်ခံစာသစ်။
ပထမဦးဆုံး ရိုဟင်ဂျာ သတင်းစာဆရာ ကွယ်လွန်
အမျိုးသမီးများကို မြန်မာစစ်တပ်က အစီအစဉ်ရှိရှိ နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ပြီး ဖုံးကွယ်ရန် ကျိုးစားမှုကို ရိုဟင်ဂျာတို့က အစီရင်ခံစာထုတ်
တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာသက်သေများ - ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးများကို မြန်မာစစ်တပ်က ဖိနှိပ်ရက်စက်ပုံ အသေးစိပ် အစီရင်ခံစာ
အကျဉ်းသားကား ရမ်းကားမောင်းနှင် နေသောကြောင်း ပြည်သူများ ထိတ်လန့်
တည်ငြိမ်မူကို ပျက်ပြားစေရသည့် အကြောင်းအရင်း။
နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်အတွင်း လွတ်လပ်စွာ အခြေစိုက် နေထိုင်ခွင့် ရှိ - မရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သတ်၍ ငြင်းခုန်ကြရာဝယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ လူ့အဖွဲ့အစည်း
ဲမြန်မာ့မြေ မှ မွတ်ဆလင်များ
ရိုဟင်ဂျာများ ရခိုင်ပြည်တွင် ဗြိတိသျှတပ် (၁၈၂၄ ခုနှစ်) မတိုင်မီကတည်းက အခြေချ နေထိုင်သူများ ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာပညာရှင်များ နှင့် ကမ္ဘာသမိုင်းရှင်များ၏ တင်ပြချက်များ
ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းကို စောဒက တက်နေသူများသို့ ရှင်းလင်းဖြေကြားချက် တစေ့တစောင်း
တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ် သက်သေများ ၊ မောင်တောတွင် မြန်မာစစ်တပ်၏ မုဒိမ်းကျင့်မှု နှင့် ရက်စက်ပုံများကို ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးများ ဖွင့်ပြော
Witness to Horror: new report details Myanmar Army atrocities against Rohingya women
ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်အချို့မှာ ညမထွက်ရ အမိန့် ရုပ်သိမ်း
မောင်တောတွင် ရေငံငါး ရှားပါးမှု ကြုံတွေ့နေရ
အမေ့ခံ လူသား သို့မဟုက် မြေဇပင်
ကိုကိုလင်း (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူတွေ၊ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာအစိုးရနှင့် ရခိုင်တွေသာလျှင် တာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောရ မှာထက် စီးပွားရေး လောဘသားကောင်ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံကြီးဆိုသူတွေ ပိုပြီးတာဝန်အရှိဆုံးပါခင်ဗျား။
0 Comment	Hits:2576 Read More...
အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းလိုသည်ဆိုရာဝယ်…
ကိုကိုလင်း (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတွေက ရိုးသားတဲ့ပြည်လူထု ၄ သန်းခန့်ကို သွေးဆောင်ဖြားယောင်ပြီး ယင်းတို့၏ လက်မှတ်များ ရ ယူကာ အမျိုးစောင့် ဥပဒေ (၄) ရပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းပေးရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ တင်ပြ လိုက်ပါတယ်။ သမ္မတက တဖန် ပါလီ မန်မှာ ဆွေးနွေးမှုများလုပ်ပြီး၊ အဆိုပါ ဥပဒေ (၄) ရပ် ကို ပြဋ္ဌာန်း...
0 Comment	Hits:1672 Read More...
သည်မိုး သည်လေ သည်လူတွေ
ကိုအောင်တင် ဇွန်လ(၂)ရက် ၂၀၁၃ခု မနက်ပိုင်း RFAမှာ ရိုဟင်ဂျာလူဦးရေ ထိန်းချုပ်ရေးကိစ္စကို ကနေဒါက ဒေါက်တာခင်စောဝင်းနဲ့ အမေရိကက ကိုအောင်မိုးဝင်းတို့ ထောက်ခံ ဆွေးနွေးသွားတာကို စိတ်မသက်မသာ နားထောင်ရတယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကလည်း ဒေါက်တာခင်စောဝင်းရဲ့ ထောက်ခံဆွေးနွေးချက်ကို RFAက အကြိမ်ကြိမ် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။
0 Comment	Hits:4878 Read More...
အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့တင်ပြသည့် စာတမ်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ဒေသခံ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များသည် ဥပဒေကြောင်းအရ လည်းကောင်း၊ သဘာဝအလျောက် မွေးရာပါ နိုင်ငံသား ဖြစ်၍လည်း ကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်၏ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသည့် စာတမ်း စာတမ်း အပြည့်အစုံ ကို ဖတ်လိုလျှင် ဤနေရာတွင် ခလိပ်နှိပ်ပါ။
0 Comment	Hits:3906 Read More...
ဆောင်ပါးအပြည့်အစုံ ကို ဖတ်လိုလျှင် ဤနေရာတွင် ခလိပ်နှိပ်ပါ။
0 Comment	Hits:3724 Read More...
ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးနွယ်စုသည် နိုင်ငံသား ၊တိုင်းရင်းသား နှင့် မြန်မာမျိုးနွယ်စု ဟုတ်မဟုတ် ဓါတ်ခွဲ စမ်းသပ်ခြင်း
ကိုမင်းထွန်း၊ ရန်ကုန်။ ကျွန်တော်ရဲ့  လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကို ချမရေးခင် ဦးစွာပထမ စာဖတ်သူတွေသိအောင် ကျွန်တော်အနေနဲ့ ပြောစရားလေးအနည်းငယ်ရှိနေလို့ ပြောခွင့်ပြုပါလို့ ခွင့်ပန်းပါရစေ။
0 Comment	Hits:14543 Read More...
"ရခိုင်ပြည်ဖွား ရိုဟင်ဂျာဘ၀” (ကဗျာ)
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့ အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံ (၂/၂၀၁၄) အား ကန့် ကွက်ခြင်း
လွတ်လပ်သော အာရှ အသံ မှ ထုတ်လွှင်သော သတင်းအပေါ် အေအာရ်အန်အို မှ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချ
ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးတွဲကြေညာချက်
Copyright © 2001 - 2014. All Rights Reserved. www.kaladanpress.org/burmese